BBC'n Afaan Oromootiin tamsaasa raadiyoo kan eegalu ta'uu beeksise - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured BBC’n Afaan Oromootiin tamsaasa raadiyoo kan eegalu ta’uu beeksise
Afaan Oromoo guddisuufi odeeffannoo haqaqabeessa Oromoo biraan geessuu irratti shoorri BBC Afaan Oromoo taphatu salphaa hin ta'u
BBC’n ukkaamamiinsa miidiyaa wolabaa fi hir’ina dimokraasiitu jira jechuudhaan tamsaasa kallattiidhaan Gaafa Afrikaa irratti xiyyeeffate dabarsuuf kan karoorfate. Yeroo BBC’n labsii isaa ifa godhetti afaan kamiin akka dabarsu ifa hin goone ture. Oromoon heddu sodaafi yaaddoo Afaan Oromoo nidagatama jedhuun sagalee wolitti qabuudhaan BBC irratti dhiibbaa godhaa turan. Dhiibbaa moo jalqabumaa BBC’n karoora Afaan Oromoon tamsaasuu qaba? Wanti beekame hin jiru. Wanti ammatti beekame yoo jiraate, garuu, BBC’n Afaan Oromootiin kan tamsaasu ta’uu isaati. Kuni Oromoo fi kanniin Afaan Oromoo dubbatan hundaaf gammachuu fi injifannoo guddaadha. Baga gammanne!
Karoora haarawa kana hujitti geeddaruudhaaf kan isa dandeessisu, BBC’n, deeggarsa maallaqaa Paawundii miliyoona 85 mootummaa Biriitaaniyaa irraa argateera.
Previous articleBaqattoonni Itoophiyaa 105 gara A/Kibbaa deemuuf turan Tanzaaniyaa keessatti hidhaman
Next articleQabsoon barattoota Oromoo tarsiimoofi jarmayaa cimaa masaku barbaaddi
dhabaafinamaan nahinjijjiirin Nov 30, 2015 At 3:02 pm